Liva Andriamanantena · Desambra 2018 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Desambra, 2018
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Desambra, 2018
Ny fitsidihan'ny Sekreteram-panjakana Hillary Clinton tany Ekoadaoro
Nitsidika an'i Ekoadaoro ny Sekreteram-panjakana Amerikana Hillary Clinton ny 8 Jona 2010, izay nihaonany tamin'ny filoha Rafael Correa mba hifanakalo hevitra momba ny olana samihafa. Ireo mpisera Twitter dia naneho hevitra momba ny fitsidihan'i Clinton, izay nahitana taratra ny andiana fihetseham-po manoloana an'i Etazonia sy ny fifandraisany amin'i Ekoadaoro.
Ekoadaoro: Ny taona 2009 ho an'ny tontolon'ny bilaogy Ekoadaoreana
Tamberina noho ny faran'ny taona
Oganda: An-jatony no maty tamin'ny fihotsahan'ny tany
Olona miisa 80 farafahakeliny no maty ary mihoatra ny 300 no tsy hita tany atsinanan'i Ogandà ny alatsinainy hariva noho ny fihotsahan'ny ranom-potaka . Ny fihotsahan'ny ranom-potaka vokatry ny oram-batravatra dia nitelina tanànakely telo tao amin'ny distrikan'i Bududa ary namindra olona maherin'ny 2.000 niala ny tranony.
Korea: Aza ampitomboina ny taonako!
Azia Atsinanana 27 Desambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Any Korea, misy fomba roa hanombantombanana ny taonanao: amin'ny fomba Koreana sy amin'ny fomba Tandrefana. Ny fomba Koreana no fomba ofisialy hikajiana ny taonanao any Korea. Raha vao teraka ianao dia efa iray taona. Na oviana ianao no teraka...
Però: Oram-be sy fihotsahan'ny ranom-potaka tao Cusco
Niharan'ny oram-batravatra sy ny tondradrano ny faritra Cusco, Però, ary namela mponina niharam-boina an'arivony maro . Nametraka fanontaniana tsy voavaly momba ny fiomanan'ny faritra manoloana ireo karazana loza voajanahary ireo ny voina.
Ethiopia: Bilaogy nanjavona
Afrika Mainty 26 Desambra 2018
(Marihina fa tamin'ny volana May 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Tototry ny fanombatombanana sy ny fiampangana ny tontolon'ny bilaogy ao Ethiopia rehefa nanjavona tao anatin'ny efijerin'ny solosaina ireo tranonkala rehetra tao amin'ny firenena ka niantrano tao amin'ny sehatra Blogger malaza. Bilaogy telo amby roapolo tamin'ireo bilaogy Ethiopiana miisa 32...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Desambra 2018